विशेष – Page2– Medianp
यी नै हुन् पाकिस्तानी छोरी नेपालकी बुहारी आम्ना हेर्नुहोस् सुन्दर तस्वीर
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २४, २०७५१४:३०
काठमाडौँ । सूचना आदनप्रदान गर्न र टाढिएका आफ्न्तलाई नजिक गराउने सजिलो माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जालले धेरैको घरबार बसाएको छ । यस्तै सन्दर्भलाई लिएर यतिबेला एक जोडी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । जो तीनै हुन् पाकिस्तानकी
मानिस एक सामाजिक प्राणी हो । मानिसको जन्म समाजमै हुन्छ, त्यहि हुर्कन्छ, त्यहि जीवन बिताउँछ र मुत्यु पनि त्यहि हुन्छ । यस अर्थमा मानिस एक्लै जिउन नसक्ने प्राणी हो । आमाले बच्चालाई जन्म दिने बित्तिकै
शिवरात्रि बिशेष : सुन्नुहोस ५ उत्कृष्ट नेपाली लोक शिवभजन (भिडियो सहित)
MediaNP NPप्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २०, २०७५११:३५
आज महाशिवरात्रि, हिन्दुहरूको प्रमुख चाड महाशिवरात्रि भगवान शिवको प्रमुख पर्व हो । कालरात्री मोहरात्री, सुखरात्री र शिवरात्री नामक चार प्रमुख रात्री मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा महाशिवरात्रिलाई पुराणहरूमा बर्णन गरिएको छ । फागुन कृष्ण चतुर्दशीका
विश्वकै सबैभन्दा चिसो सहर, जहाँ वर्षमा ९ महिनासम्म जम्छ हिउँ ! २ महिनासम्म त सुर्य समेत देख्न पाइदैन्
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १६, २०७५१४:२०0
काठमाडौ । विश्वको कुनै देशमा यस्ता केही ठाँउहरु पनि रहेका छन् । जहाँ अत्याधिक चिसोको कारण मानव र अन्य जिवितप्राणीहरु बस्न सक्दैनन् । जसले गर्दा यस ठाउँको नाम नै चिसो सहर राखिएको छ । आज
चन्द्रागिरीमा चार फिटसम्म हिउँ, पर्यो अहिले सम्मकै बाक्लो हिउँ (तस्विर)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १६, २०७५१२:०३0
काठमाडौं, १६ फागुन । बुधबार रातिदेखि परेको हिउँले काठमाडौं उपत्यकाको चारैतिरका डाँडाकाँडा सेताम्य बनेका छन् । फुल्चोकी, शिवपुरी र चन्द्रागिरीमा भने सबैभन्दा धेरै हिउँ परेको छ । चन्द्रागिरीमा धेरै ठाउँमा चार फिटसम्म बाक्लो हिउँ परेको छ
तपाईको नामलेनै तपाईलाई बनाइदिएको हुन्छ, अर्थपूर्ण !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १५, २०७५१२:०८0
प्रत्येक मानिसलाई चिनाउने काम नामले गर्दछ । नाम एक मानिसको चिनाउने संज्ञा हो । यहि नामबाट नै हामीले हाम्रो जीवन अगाडी बढाइरहेका हुन्छौं । सबैले अनुभुती गरेका पनि छन् जहाँ तपाईको नाम उच्चारण हुन्छ, त्यहाँ
अफिसमा यी ५ काम भुलेर पनि नगर्नुस, खतरा हुन सक्छ
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १५, २०७५११:२२0
काठमाडौ । हामी आफ्नो जीवन सुखमय बनाउनको लागी विभिन्न काम गरेर पेट पालिरहेका हुन्छौ । त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसार विभिन्न साना देखि लिएर ठुल ठुला अफिसियल कामहरु गर्ने गर्दछौ । तर यस बेलामा हामी काम
ब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि तनहुँकी सुजनाले घरमै घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी’ तौल !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, फागुन १४, २०७५१५:५३0
ब्वाइफ्रन्डले मोटी भनेर बोलाएपछि तनँहु विमलनगरकी सृजना श्रेष्ठले घरमै बसेर ६ महिनामा करिब ३६ केजी तौल घटाएकी छिन् । उनी स्टन्ट राइडरको साथमा २०१५ मा मिस तनँहु समेत बन्न सफल भएकी थिइन् । सानोमा एकदमै दुब्लो
चर्चित बलिउड कलाकारको अगाडि नेपाली आयुषले देखाए गज्जबको प्रस्तुति (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १३, २०७५१३:५९0
भारतको टेलिभिजन च्यानल ‘जी टिभी’ को चर्चित बालगायन रियालिटी कार्यक्रम ‘सारेगामापा लिटिलच्याम्प’ मा सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल भक्तपुरको मोर्डन बोर्डिङ स्कुल कक्षा ७ मा पढ्ने वर्ष १२ का आयुष केसी पूरा भारत र नेपालसमेत हाल
आफू मरेर यात्रु बचाउने पाइलटका परिवार ‘को बन्छ करोडपति’मा.., कार्यक्रम बन्यो निकै विशेष !जिते ३ लाख २० हजार(भिडियोसहित)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १२, २०७५१२:२७0
काठमाडौं । यतिबेला ब्रिटेनको चर्चित टेलिभिजन शो ‘हु वान्ट्स टु वि ए मिलेनियर’को नेपाली संस्करण ’को बन्छ करोडपति’ एपीवान एचडीबाट प्रसारण भइरहेको छ । महानायक राजेश हमालले सञ्चालन गर्दै आएका उक्त कार्यक्रम एपीवान एचडीबाट शनिवार,